Mist of Pandaria - WoW Guides | WoW Guides
Torolàlana momba ny lalao: Elites amin'ny Nosy Manokana
Aloha! Androany aho mitondra torolàlana hafa mankany amin'ny faritra hafahafa any Pandaria, ny Nosy Manokana. Hiezaka izahay hahita ny rehetra ...
Torolàlana momba ny fikatsahana: fanontaniana tsy manam-potoana
Aloha! Anio dia entinay aminao ity torolàlana ity hahafahanao manatanteraka ny iraky ny mpahay tantara veteranina Evelyna ao amin'ny nosy ara-nofo ...
Torolàlana momba ny laza: ny Hermits
ny Wow mpitari-dalana hace 9 taona .
Torolàlana Tortos, azo jerena ao amin'ny hantsana amin'ny hakamoana; amin'ny andron'ny kotroka. Nandritra ny an'arivony taona maro, majika mavesatra am-pahefana mogu dia niroboka tao anaty lava-bato ambanin'ny tranoben'ny Thunder King. Ny herin'ny maizina dia nanodinkodina ny iray amin'ireo sokatra zanatany tao an-trano ary nampifangaro azy tamin'ny rindrina kristaly manodidina. Fantatra amin'ny anarana hoe Tortos, io fitambarana hena sy vato io dia nanangona ny harena an-kibon'ny harena an-kibon'ny zohy ary nitombo habe.
Ion: Ho fanampin'ny fanontaniana hoe maninona isika no miady, ary ny lesona fa ny tena fahavalontsika dia ady, ny iray amin'ireo lohahevitra manandanja indrindra amin'ny Mists of Pandaria dia ny famonoana sokatra. Ity fihaonana ity dia mitondra an'io lohahevitra io amin'ny fomba mahery vaika vaovao ary manome ny mpilalao ny fotoana azo atao hiadiana amin'ny sokatra. goavam-be ary manohitra fanoza kely, ankoatra ny fanomezana azy ireo fahaizana mandaka ny iray amin'ireo sokatra mankany amin'ilay sokatra lehibe kokoa. Inona koa no mbola angatahin'izy ireo?
Zava-misy mahafinaritra: Tany am-boalohany dia te-hamorona lehiben'ny Fire Turtle izahay ao amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Firelands for Patch 4.2, fa nanapa-kevitra ny hanohitra izany. Nanomboka teo dia niandry ny fotoana hiadiana amin'ny sokatra izahay.
Seza fiorenan'ny kotroka na sezaky ny kotroka
El Seza fiorenan'ny kotroka na sezaky ny kotroka io dia tarika azo alaina ao amin'ny patch 5.2. Ny Emperora Lei shen, ny Mpanjakan'ny Thunder, dia niverina namoaka ny valifaty nataony tany Pandaria. Anjaràn'ireo maherifo ao amin'ny Alliance sy Horde ny mampitsahatra ilay mpanao jadona vao natsangana tamin'ny maty sy ireo mpiara-dia aminy Zandalari ao amin'ny andian-jiolahim-boto lehibe: Seza fiandrianan'ny kotrokorana.
Ny Throne of Thunder dia trano mimanda iray misy trano fihaonana vaovao 12, ary ireo mpilalao mandresy ny amperora Lei Shen ao amin'ny Heroic Mode dia afaka mahazo fotoana hiatrehana fahavalo fahatelo ambin'ny folo. Ny dikan'ny seza fiandrianan'ny Thunder Raid Finder dia hizara elatra 4 hafa. Midira amin'ny Fanafihana Shado-Pan amin'ny fampielezan-kevitr'izy ireo handresy an'i Lei Shen, ilay Mpanjakan'ny Thunder, indray mandeha, ary hahazo fidirana amina valisoa valisoa miaraka amin'ireo isa manome lanja. Ity laza ity dia tsy azo atao afa-tsy amin'ity antoko ity ao amin'ny seza fiandrianan'ny Thunder Raid Dungeon.
Nalak, ilay Storm Lord
Rehefa avy nandresy ny Nosy Thunder Hiseho ny mpiambina ny vavahady misy ny tranon'ny Mpanjaka Thunder: Nalak, The Storm Lord. Ny mpilalao dia hanana fotoana hanaporofoana ny lanjan'izy ireo amin'ny alàlan'ny fitondrana azy.
Oondasta, sefo vaovaon'izao tontolo izao, dia hita eo amin'ny nosy mikitroka amoron-tsiraka avaratr'i Kun-Lai. Hahita ilay demôzôra mijanona ao anaty vava volkano eo afovoan'ity faritra ity ianao.
Rehefa nipoaka ny ady tamin'ny trano mimanda, dia nosakanan'ny skotisma ny zana-tsipìka hita tany amin'ireo tobin'i Zandalari. Ny iray tamin'izy ireo dia nisy teny Zandalari tsy fantatra ary voahodidin'ny teny mandresy sy fahefana foana: Oondasta. Na aiza na aiza ao Pandaria, ny Zandalari Beast Guard dia mampiofana ny zavaboariny hamadika azy ireo ho fitaovam-piadiana, ary ankehitriny dia mametraka ny farany amin'ny an'ity biby goavambe ity izy. Na izany aza, mijanona ho mistery ny toerana tena ...
Torolàlana an'i Ra Den, azo jerena ao amin'ny Pinnacle of Storms (Throne of Thunder). Niova mandrakizay ny fiainan'i Lei Shen rehefa nivezivezy tao amin'ny efitranon'ny efitrano izy ambanin'izay antsoina hoe Chambers Mogu'shan ankehitriny. Ny angano dia nilaza fa nahita titan taloha niambina fitaovana mahagaga iray fantatra amin'ny anarana hoe Nalak'sha Engine. Tsy misy mahalala ny zava-nitranga teo amin'ireo olona roa ireo, fa i Lei Shen dia nivoaka avy tao amin'io toerana io niaraka tamin'ny hery ampy hananganana emperora iray. Mijanona ho mistery ny fiafaran'ny mpiambina sy ny toerana misy azy ankehitriny
Ion: Ity no "Algalon" an'ny faritra; boss fanampiny ho an'ny mpanafika efa za-draharaha izay nahavita ny fivoaran'ny faritra lehibe. Lei Shen no tena tompon'andraikitra farany ao amin'io faritra io, ary tianay ho azo antoka fa izany no izy. Tsy toy ny zava-mitranga amin'i Sinestra ao amin'ny Bastion of Twilight, hahatongavana any Ra-den taorian'ny nanokafany azy, ilaina ny miverina dingana vitsivitsy. Ao amin'ny torolàlana momba ny trano-maizina, ny mekanika amin'ny ady dia tsy fantatra mazava, ka tsy hiteny betsaka intsony aho. Ny tena tanjon'ny torolàlana momba ny tranomaizina dia ny manome ireo mpilalao manandrana mikaroka loharano ao anaty lalao mba hialana amin'ny fivoahana mamaky torolàlana ao anaty tranokala. Amin'ny raharahan'i Ra-Den, fantatray fa ireo mpilalao voalohany nahita azy io dia mety ho ireo izay matetika no manoratra ireo torolàlana an-tserasera ireo, koa antenaina fa hiaina fahatsapana fahitana izy ireo raha vao nahita izany.
Torolàlana ho an'i Lei Shen, The King Thunder, azo jerena ao amin'ny Pinnacle of Storms (Throne of Thunder). Masiaka, mpanao didy jadona, mpandresy ary amperora. Nahazo ireo anaram-boninahitra ireo ny Mpanjaka Thunder rehefa avy nitondra ny hazakazaka rehetra any Pandaria hilaza fahantrana. Nitsangana tao amin'ny tontolo iray izay tsy misy mpitondra intsony ny olony, Lei Shen dia tapa-kevitra ny hamarana ity charade ity ary ho lasa tompon'ny tany rehetra indray.
Ion: Ny foto-kevitra afovoan'ny tolona Lei Shen dia nipoitra nandritra ny fotoam-pisainana atidoha iray izay nahatonga ny mpikambana ao amin'ny ekipa mpamolavola lalao hiova karazana ho an'ny mekanika miady amin'ny ady ary manandrana mijery raha misy amin'izy ireo no miasa. Hevitra malaza iray ny hoe mila mijanona tsindraindray sy mamerina manamboatra tsindraindray ilay Mpanjaka Thunder, fa nisy kosa nanoso-kevitra ny hanodinkodina mahaliana: Ny Thunder King dia tsy bateria fotsiny tokony haverina; raha ny marina dia izy tenany no loharano. Ka raha tokony hitroka hery avy ao amin'ny trano mimanda izy, dia handray hery avy ao aminy ilay trano mimanda. Izy dia mpiady mahery vaika amin'ny azy manokana, miaraka amin'ny fitaovam-piadiana tsy manam-paharoa sy ny fanafihana herinaratra, noho izany ny fisiany fotsiny dia mamelona sy mampihetsika ny faritra samihafa amin'ny fiarovana ny tranony; Ny fitantanana handresena ireo fiarovan-tena ireo no singa afovoany amin'ity lalao ity. Miaraka amin'ny valin'ny fahitana marobe noforonin'ireo mpanakanto vokatray ary tranomaizina misy ambadika mampihetsi-po (ireo rindrina ireo dia tsy haingon-trano fotsiny), i Lei Shen no fihaonambe farany nitranga tamin'ny faritry ny andian-jiolahim-boto.
Torolàlana momba ny Twin Consorts - Twin Consorts, azo alaina ao amin'ny Pinnacle of Storms (Throne of Thunder). Ny Consorts kambana ao Lei Shen, Lu'Lin ary Suen, dia voalaza fa harena sarobidy indrindra amin'ny Mpanjaka Thunder. Mandeha ny resaka fa izy ireo ihany no vehivavy mpikambana ao amin'ny mogu misy. Lei Shen dia mitazona ny harenany akaiky; ary na dia akaiky kokoa aza ny arsenal mahery mitambatra izay mahatonga azy ireo ho matanjaka amin'ny mpanelanelana.
Ion: Ireo mpilalao dia mety nahatsikaritra ny tsy fisian'ny mogu vehivavy nandritra ny diany namakivaky ny kaontinanta Pandaria. Ireo mpilalao mijery akaiky ny maodelin'ireo zaza kambana any an-danitra ireo dia hahatsikaritra fa ny endrik'izy ireo dia toa voasokitra tamin'ny vato. Ary izany no izy. Ireto zaza kambana ireto dia noforonin'i Lei Shen manokana ary nohamafisina hanompo sy hiaro azy, noho izany dia taratry ny sitrapony fa tsy tandindon'ny kolontsaina mogu iray manontolo. Ny andiany teo aloha tamin'ity ady ity dia ny fanahin'ny Masoandro sy ny Volana, saingy tsy nikatona io hevitra io (ary fantatsika rehetra fa ny tena fanahin'ny volana dia i Elune, ary mazava ho azy fa tsy nigadra izy. Mpanjakan'ny kotroka).).
Qon the Tenacious Guide - Iron Qon, hita ao amin'ny Pinnacle of Storms (Throne of Thunder). Mitantara ny habibiana nataon'i Qon sy ny tompondakan'i Quilen ny angano. Ity komandy mogu tsy mitandrina ity dia nantsoin'ny Mpanjaka Thunder fa "Qon the Tenacious" noho ny finiavany tsy azo tohaina hahazoana fandresena aorian'ny fandresena na inona na inona vidiny.
Ion: Qon dia iray amin'ireo mpiambina an'i Lei Shen, ary tompon'andraikitra amin'ny ady totohondry. Ny aingam-panahy ho an'ny foto-kevitra tany am-boalohany tamin'ity tolona ity dia avy amin'ny tanan'i Lu Bu, mpitondra ady tamin'ny fotoan'ny Fanjakana Telo; mpiady masiaka fantatra amin'ny fahaizany miady amin'ny soavaly mitaingina soavaly. Na dia manana sary mihetsika mamiratra sy tsy manam-paharoa Qon aza i Qon dia nanapa-kevitra izahay tamin'ny farany fa hahaliana kokoa ny hijerena ny safidin'ny lalao amin'ny alàlan'ny fahaizan'ireo tendrombohitra hafa. Noho io antony io, ny fihaonana dia mampiseho an'i Qon mitaingina quilen majika isan-karazany, izay samy nohamafisin'ny fanafihana singa mahery vaika tokoa. Izany dia miteraka lalao efatra izay mifanakaiky kokoa amin'ny ady efatra natambatra ho iray.